Myanmar(Birmania) : Nandresy tamin’ny fifidianana ny antoko tohanan’ny miaramila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2018 3:25 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, 繁體中文, 简体中文, Nederlands, বাংলা, Português, English
Nokarakaraina tao Myanmar ny fifidianana voalohany 20 taona taty aoriana ary araka ny efa nampoizina dia ny antokon’ny fiaraha-mientana sy ny firaisankina (USDP) izay notohanan’ny miaramila mpanongam-panjakana no nandresy tamin’ny nahazoany ny 80 isanjaton’ny toerana tao amin’ny parlemanta. Saingy nilaza ireo mpanohitra fa nisy hosoka ity valim-pifidianana ity.
Nanome famintinana ny zavatra niseho tamin’io andro io tao amin’ny bilaogy The irrawaddy i Kyaw Zwa Moe:
Nandresy tamin’ny fifidianana ny Alahady ireo minisitra am-perinasa sy ireo minisitra lefitra rehetra tao amin’ny governemanta miaramila
Mazava ho azy, fa anisan’ny nandresy ny Praiminisitra M. Thein Sein ary nandresy tamin’ny fifidianana tao amin’ny fari-piadidiany ihany koa ny Minisitry ny Raharaham-bahiny M.Nyan Win, satria tsy nisy ny mpifaninana taminy, tahaka ireo kandidà miisa 52 avy amin’ny antokon’ny jadona miaramila, ny antokon’ny fiaraha-mientana sy ny firaisankina (USDP). Hisy ny governemanta vaovao , ahitana ireo minisitra am-perinasa maromaro amin’ny volana manaraka.
Nampiasaina ny hosoka [Joker Votes] mba hanodikodinana ny valim-pifidianana.
Nahazo ny 82 isanjaton’ny toerana tao amin’ny parlemanta hoe ny USDP. Tsy mahagaga izany. Naverimberintsika foana fa nanao hosoka fifidianana i Atoa Than Shwe sy ny ekipany. Ny ankamaroan’ny antoko manohana ny demokrasia sy ny ara-poko izay nandray anjara tamin’ny fifidianana dia nahafantatra fa nanao hosoka ny USDP, saingy mbola ratsy lavitra noho ny noeritreretina ny nataony.
Nanomana sarintsarim-pifidianana ny USDP. Nilaza ireo vavolombelona sy ireo mpitarika ny antoko manohana demokrasia fa omena mialoha ny vokatra isaky ny hita fa ho resy ny kandidà avy ao amin’ny USDP. Izany no antsoina ao Rangoon hoe « votes jokers ».
Raha fantatra fa kisarisariny ireny fifidianana ireny ary ny fitondrana miaramila no nametraka ny vokatra dia nanapa-kevitra ny hanao ankivy ny fifidianana ireo antokon’ny hetsika manohana ny demokrasia tarihin’ilay mpanohitra malaza Ramatoa Aung San Suu Kyi.
Nametraka sarintany hanaraha-maso ny fifidianana amin’ny aterineto mba hamantarana ireo trangàna hosoka, herisetra ary ireo fihetsiketsehana ny sehatra The Democratic Voice of Burma (feo demokratika ao Birmania).
Nitantara i Hseng Khio Fah izay nanoratra tao amin’ny Shan Herald hoe : ahoana ny fihetsik’ilay kandidàm-panjakana nandritra ny fifidianana tany amin’ny fanjakan’i Shan.
Nanome 10.000 Kyats (10 dolara Amerikana) ho an’ireo mpifidy tsirairay tany amin’ny fari-piadidiany i ‘’ Kyaw Myint ( kandida)’’. Nivoaka tao amin’ny trano fandrotsaham-bato niaraka tamin’ny tsikitsiky ireo mpifidy izay nahazo ny vola ary nampiseho anay ny vola azony sady nilaza fa nahazo loto tao amin’ny biraom-pifidianana izy ireo.
Nitondra vatom-pifidianana mihoatra ny 500 isa avy any amin’ny birao iray hafa i Kyaw Myint ary nampiditra izany tao amin’ny vata fandatsaham-bato mba ho isaina.
Niaraka tamin’ny milisy miisa 80 ihany koa izy, nandritra ny fifidianana mba hanara-maso ireo trano fandatsaham-bato.
Nifanohitra tamin‘ny fanambaran’ny governemanta ny fijoroana vavolombelona sy ny tatitra nataon’ireo mpanara-maso, izay nivoaka tao amin’ny gazety The New Light of Myanmar (fahazavana vaovaon’i Myanmar). Nanambara ny governemanta fa nilamina ny fifidianana ’ny maroantoko ara-demokratika tamin’ny taona 2010 ary ireo diplaomaty na mpanao gazety izay nitsidika dia ’’nahita ny mpandray anjara nifidy malalaka sy faly ary nanatrika ny fanisana ny vatom-pifidianana tao amin’ny biraom-pifidianana. Nampiany hoe :
Hitan’izy ireo ny fandraisana anjara malalaka sy tamin-kafaliana nataon’ny mponina teo an-toerana, ny fanisam-bato sy ny fandraketana an-tsoratra izany tao amin’ny endrika taratasy efa voahomana manokana tao amin’ny birao fanisam-bato.
Nipoaka ny herisetra tamin’ny andron’ny fifidianana, rehefa nifandona tamin’ny tafika Bodista Karen demokratika ny miaramilan’ny governemanta. Nahatonga ny famindrana olona miisa 17.000 mahery ny fifandonana, izay nitady fialofana tany akaikin’ny sisintany miaraka tamin’ny firenena mpifanolo-bodirindrina, Thailandy.